Now & Ever လက်စွပ်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်နဲ့ ပြသနာတက် အငြင်းပွားခဲ့ရတဲ့ ခရစ္စတီးနားခီ
November 23, 2019 Cele Family
ထာဝရနှောင်ကြိုး-Now and Ever ရုပ်ရှင်ဟာ ဒါရိုက်တာ ခရစ္စတီးနားခီရဲ့ တစ်နိုင်ငံလုံးဝက်ဝက်ကွဲ အားပေးခဲ့ကြတဲ့ ရုပ်ရှင်ပဲဖြစ်ပါတယ် ကြည့်ရသူတိုင်း ငိုခဲ့ရသလို သီဟနဲ့ ဝတ်မှုန်လို အရမ်းချစ်ကြတဲ့ လင်မယားကိုလည်း အားကျခဲ့ကြတာပါ လတ်တလောမှာတော့ အဲဒီရုပ်ရှင်ကားထဲက ဝတ်မှုန်ဝတ်ထားတဲ့လက်စွပ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒါရိုက်တာ ခရစ္စတီးနားခီနဲ့ ရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင် ဆရာဝတ်တစ်ဦးတို့အကြားမှာ အငြင်းပွားဖွယ်ရာ ပြဿနာလေးတစ်ရပ်ဖြစ်နေပါတယ်
အဲတာကတော့ ရွှေဆိုင်က ဝန်ထမ်းလေးတစ်ဦးကနေ ထာဝရနှောင်ကြိုး ရုပ်ရှင်ထဲက ဝတ်မှုန်ဝတ်တဲ့ လက်စွပ်လိုမျိုး ပုံလေးတင်ပြီး “I Love U…Now & Ever ကဲ ထာဝရနှောင်ကြိုးကားထဲက ဝတ်မှုန်ရဲ့ လက်စွပ်လေးရပါပြီနော်..” ဆိုပြီး လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်တင်ခဲ့ပါတယ်ဒါကို ဒါရိုက်တာ ခရစ္စတီးနားခီက စခရင်ရှော့ရိုက်ပြီး “Copy right??? ဘာကြီးလဲ???” ကဘာကြီးလဲဆိုပြီး မူပိုင်ခွင့်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပို့စ်တစ်ခု ခုလိုတင်ခဲ့ပါတယ်
ခရစ္စတီးနားခီတင်ခဲ့တာကတော့ “Copy right??? ဘာကြီးလဲ???Infinity ဟာ မူလထဲက ရှိပြီးသားပါ ကြိုက်တဲ့သူ သုံးပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်…ဒါပေမယ့် လက်စွပ်လေးမှာ ရေးတဲ့စာ…သီဟနဲ့ ဝတ်မှုံ… ထာဝရနှောင်ကြိုး…Now and Everတို့ကတော့ ဖန်တီးသူရဲ့ မူပိုင်ခွင့်ဆိုတာရှိပါတယ် ဒါလေးကြိုက်တယ်ရုပ်ရှင် ကြိုက်လို့ လေးစားလို့ လိုချင်လို့ တခြားဆိုင်မှာ လုပ်လိုက်တယ် လိုချင်သူများလို့ ရောင်းလိုက်တယ်ဆိုတာဟာ မူပိုင်ခွင့်နဲ့ ညှိပါတယ်ဆိုတာ သိစေချင်လို့မတတ်နိုင်လို့ တတ်နိုင်သူများ အတွက် ရောင်းလိုက်တာဝယ်လိုက်တာ ဆိုရင်လည်း လုပ်ခွင့်မရှိပါ
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ကျမ မတတ်နိုင်တာတွေအများကြီးပါ မတတ်နိုင်တော့ မဝယ်ဘူးပေါ့ ဝယ်ပြီဆိုလည်း မူရင်းကိုသာအားပေးပါမယ်…ရုပ်ရှင်ရဲ့ ကုန်ပစ္စည်းထုတ်ရောင်းရတာ စီးပွားဖြစ်ထက် အမှတ်တရ ပိုဆန်ပါတယ် ဒါတွေအရမ်းမက်မောတတ်တဲ့ အနုပညာသမားလည်းမဟုတ်ပါ…အလုပ်လက်ခံလိုက်ရင် ဒီထက့် ဝင်ငွေပိုကောင်းပါတယ် ဒါပေမယ့် လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိတာကိုတော့ လူတွေပိုသိလာစေချင်ပါတယ်…မူပိုင်ခွင့်ဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာ ပိုသိစေချင်ပါတယ် သီချင်းလည်း တခြားသူနားထောင်စေချင်လို့ စေတနာနဲ့တင်ပေးတာပါဆိုတဲ့သူများ လည်း လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူး အားလုံးအတွက်အဆင်ပြေအောင် ထုတ်လုပ်သူက စဉ်းစားမှာပါ သူ လွှင့်ချင်တဲ့နေရာ လုပ်ချင်တာ လုပ်ခွင့် ထုတ်ခွင့်ဟာ သူ့ရဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်ပါ ဒါဟာ ကျမတို့ အားလုံး လေးစား လိုက်နာရမယ့် ကျင့်ဝတ် တခုပါ
(သူများ ပိုစ့် အောက်တွင် သွားရောက် ရန်တွေ့ခြင်း မပြု လုပ်ဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်နော်)” ဆိုပြီး တင်ခဲ့တာပါ။ ဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့ ရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင် ဆရာဝန်လေးကလည်း လက်စွပ်ရောင်းရာမှာ အဲဒီလို Caption ရေးတင်လိုက်တဲ့အတွက် သူတို့ဘက်က မှားကြောင်း…ဒါပေမဲ့ ရုပ်ရှင်မတင်ခင်တည်းကလက်စွပ်က ရောင်းနေတာဖြစ်ပြီး ရုပ်ရှင်ထဲက လက်စွပ်နဲ့ ပုံစံမတူကြောင်းကို သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာခုလို ပြန်လည်ရေးသားခဲ့ပါတယ်
“သို့ မခရစ္စတီးနားခီ …ကျနော်က ရခိုင်ပြည်၊ကျောက်ဖြူမှာ တာဝန်ကျနေတဲ့ ဆရာဝန်တဦးပါ။အောင်သပြေရတနာရွှေဆိုင်က ကျနော်နဲ့ ကျနော့အမျိုးသမီး ဖွင့်ထားတဲ့ဆိုင်လေးပါ။ အင်းစိန်ဈေးထဲ မှာ ဆိုင်ပုံးလေး ၂ပုံးနဲ့ဖွင့်ထားတဲ့ ဆိုင်သေးသေးလေးရယ်ပါ။ပထမဆုံးပြောချင်တာက မနက်က ဖြစ်သွားတဲ့ ကိစ္စကို အင်မတန်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် ရှင်းပြတောင်းပန်ဖို့ရာ ဒီနေ့ကျနော့မှာ ဆေးရုံနဲ့ခွဲခန်းနဲ့ တနေကုန် ရှုပ်နေတာမို့ မရှင်းလိုက်နိုင်ဘူးခင်ဗျာ။ ခုလည်း ဒီစာကို ခွဲခန်းထဲကနေပဲ ထိုင်ရေးလိုက်ရပါတယ်။
ကျနော်တို့ ရွှေဆိုင်က အသေးလေးမို့ လာဝယ်တဲ့ ဖောက်သည်တွေဟာလည်း သူဌေးတွေမဟုတ်ပါဘူး။ ဝန်ထမ်းငယ်လေးတွေ၊ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူတွေ၊ စက်ရုံအလုပ်ရုံတွေနဲ့ ရန်ကုန်မြို့စွန်က မရှိဆင်းရဲသားများပါတယ်။ သူတို့ကလေ လာဝယ်ပြီ၊လာအားပေးပြီဆိုရင် အစွဲလေးတွေနဲ့ ခင်ဗျ။ ရုပ်ရှင်မင်းသား မင်းသမီးတွေကို သိပ်ချစ်ကြတာကလား !!! နေတိုးလက်စွပ်၊ ဟိန်းဝေယံ အဆောင်လက်စွပ်၊ ဖွေးဖွေးရေလှိုင်း လက်ကောက်၊ အူဝဲရဲ့ ငါ့ရင်ထဲကဓါးသွား ဟန်းချိန်း၊ အံ့သြစရာကောင်းအောင်ကို ချစ်ကြတာပါ။ ကျနောတို့ page မှာ အဲ့လိုလေးတွေ တင်ထားတာ တွေ့ကြပါလိမ့်မယ်။ အဲ အခုတော့ now and ever ပေါ့ဗျာ။ ဝတ်မှုန်လက်စွပ်လေးလို့ အမြဲလာမေးကြတာ ဝက်ဝက်ကွဲဗျ၊ လာကြည့်လို့ သိရင် မခရစ္စ အတွက် ဝမ်းသာဂုဏ်ယူစရာဖြစ်မလားပဲ။
အဲ အဲ့မှာ ပြသနာ စတာပဲ။ကျနော်တို့ page ရဲ့ admin ဆိုင်က မန်နေဂျာမလေးကမနေ့ညက ဝမ်းသာအားရ နဲ့ ဝတ်မှုန်လေးရဲ့ လက်စွပ်ရပြီလို့ ရေးတင်တော့တာကိုး။ သူကလည်း မခရစ္စ ပရိတ်သတ်ပါ။ သူတင်လိုက်တာ ကျနော်တို့လည်း မသိလိုက်ဘူး၊ အရင်လည်း တင်နေကြကိုး။ဒီမနက်မှ ကျနော့အမျိုးသမီးက NE ရဲ့ producer ကလာပြောနေတယ် ဆိုတော့မှ ဟာ ဒါငါတို့ foul တာပေါ့။ ချက်ချင်းပြင်ပါဆိုပြီး ပြင်ခိုင်းရပါတယ်၊ CAPTION ကို။ ပြင်ပြီးကြောင်းလဲ post တင်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ caption လေးက တညပဲ ခံလိုက်တာပါ။
ဘယ်သူမှတောင် သိပ်မသိဘူးရယ်။ အဲ့မှာ တခုပြောချင်တာက Design။ဒီလက်စွပ် DESIGN ကဆိုင်မှာရောင်းနေတာ ကြာပါပြီ။ မနှစ်ထဲက Design ပါ။ June ကတည်းက ရုပ်ရှင်ရုံမတင်ခင်ကတည်းက နောက်တသုတ် ထပ်တင်ရောင်းတာပါ။ နဂိုကတည်းက လူကြိုက်များတဲ့ Design ပါ။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင် Cartier နဲ့ Pandora ကိုမှီးတဲ့ Design ပါ။
I love you ဘာညာ ဘာစာမှ မထိုးထားပါဘူး။ အော်ဒါမှာသူက ထိုးခိုင်းရင်တော့ ထိုးပေးရပါတယ်။ တန်ဖိုးကလည်း မဖြစ်စလောက်ပါ။
လူလတ်တန်းစားတတ်နိုင်ရုံပေါ့။ကျနော်တို့ NE သွားကြည့်တော့တောင် ပြောဖြစ်ပါသေးတယ်၊မောင်တို့ design မျိုးလို့၊ ကြည်နူးစွာဖြင့်ပါ။ ချွတ်စွပ်တော့မတူပါဘူး။ ကျနော်တို့က Cartier ကို မှီးတာပါ။ဖြတ်ပြောရရင် ကျနော်တို့ လင်မယားက ခီတို့ရဲ့ ပရိတ်သတ်တွေပါ။
ထွက်သမျှ ဇာတ်ကားအကုန်အားပေးကြသလို၊ ကျနော့ ဇနီးဆို တကားကို ၂ကြိမ်ကြည့်တာ။ NE ဆိုရင်လည်း သူက ကြည့်ပြီးသားကိုမှ ရခိုင်ရောက်နေတဲ့ ကျနော့ကို အရခေါ်ပြီးတူတူသွားကြည့်ကြပါတယ်။ ကျနော်ရေးထားတဲ့ post တွေ movie review တွေဖတ်ကြည့်ရင် ဘယ်လောက်ရင်ထဲထည့်ပြီး feel ထားတာ၊ အားပေးထားတာတွေ့မှာပါ။ သီချင်း OST ဆိုလည်း original CD ကို ကျောက်ဖြူထိ မှာယူအားပေးတာပါ။အဲ့တာကို ခုလိုတွေဖြစ်ရတော့ အင်မတန်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။ကျနော်တို့ အတွက်လည်းသင်ခန်းစာပေါ့ဗျာ။ ဒီထက်ပိုပြီး ယူကြုံးမရဖြစ်ရတာကကျနော်အင်မတန်လေးစား နှစ်သက်ရတဲ့ Artist တယောက်ကArtistic မဖြစ်ပဲ နည်းနည်းလေး business ဆန်လာလို့ပါ။
Producer က မရေးပဲ၊ မခရစ္စ ကရေးလာတော့ အရမ်းရင်ထဲ နင့်ရပါတယ်။ အော် ဒါလည်း သူဖန်တီးထားတဲ့ သူရဲ့ အနုပညာပစ္စည်းကို ချစ်တဲ့စိတ်ကြောင့်နေမှာပါ လို့ ဖြေသိမ့်ပါတယ်။လေးစားရသူမို့ မခရစ္စ ကို အကြံတော့ပေးပါရစေ။ ကျနော်တို့ဆိုင်လေးက သေးသေးလေးပါ၊ ရောင်းရလှ ၁၀ကွင်း အကွင်း၂၀ ပေါ့။ ခုဆို infinity ring က ပေါက်ပြီ။တပြည်လုံးဝက်ဝက်ကွဲရောင်းရပါလိမ့်မယ်။ ရောင်းကြပါလိမ့်မယ်။ ဆိုင်ကြီးတွေလည်း NE လက်စွပ်လို့ပဲ ပြောရောင်းနေကြပါပြီနော်။
အဲတော့ လက်စွပ် ဒီဇိုင်းရယ်၊စာသားတွေရယ်၊ နာမည်တွေရယ်အားလုံးကို ရှေ့နေတယောက်ကောင်းကောင်းငှားပြီး သေချာ register လုပ်၊ သတင်းစာမှာသာကြော်ငြာထည့်ထားလိုက်ပါ။ဒါတောင် မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေက ဒီနိုင်ငံမှာ အသက်မဝင်သေးဘူးရယ်ဗျ။အင်း ခုလည်း ကျနော်တို့လို ဆိုင်သေးသေးလေးတွေရဲ့ အမှားကို အသုံးချပြီး သင်ခန်းစာပေးတယ်လို့လည်းယူဆပါတယ်ဗျာ။အနုပညာစစ်စစ်များ ထပ်မံ ဖန်တီးနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။
ချစ်ခင်လေးစားစွာဖြင့် ..P.s ကျနော်တော့ တနေကုန် အဆဲခံနေရတယ်ဗျို့။” ဆိုပြီး ပြန်လည်ဖြေရှင်းခဲ့တာပါ။ ဒီလို အပြန်အလှန်ရေးသားနေတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပရိသတ်တွေကလည်း စိတ်ဝင်တစားစောင့်ဖတ်နေကြတာဖြစ်ပြီးတော့ နောက်ထပ်ဘာတွေ ဖြစ်လာအုံးမလဲဆိုတာတော့ မသိသေးပါဘူး ပရိသတ်ကြီးတို့ကရော ဘယ်လိုမြင်လဲ ပြောခဲ့လို့ရပါတယ်နော်
ဒိုင်တွေဟာ ကျွန်တော်တို့အတွက် မှန်တစ်ချပ်လိုပါပဲဆိုတဲ့ တန်ခွန်ကျော်
အရွယ်ရောက်လာတာနဲ့အမျှ ဘိုးဘိုးဖြစ်သူလွင်မိုးနဲ့ ပိုပိုပြီးရုပ်ချင်းဆင်လာတဲ့ မြေးချောလေး Liam
နိုင်ငံခြားသားတွေရှေ့မှာ ရှေးမြန်မာဝတ်စုံလေးနဲ့ အကွက်ဆန်းတွေထုတ်ပြခဲ့တဲ့ ဖြူဖြူထွေး